jeudi, 28 juillet 2016 21:45
Mirona any amin’ny filalaovana Jeux video ireo ankizy izay ao anatin’ny fialantsasatra tanteraka amin’izao fotoana. Mila mitandrina ihany anefa izy ireo indrindra eo amin’ny fahasalamana satria dia mety hitarika areti-maso ny fanaovana ireny Jeux ireny raha tsy voafehy ny fotoana anaovana azy, ilaina araka izany ny fanaraha-maso ho an’ireo Ray aman-dreny amin’izao fotoana fialantsasatra izao. Marihina fa andoavam-bola ny fanaovana azy, amin'ireny toerana voatokana ireny, ka ilaina ihany koa ny manara-maso ny ho mety fanitarana amin’ny resaka ara-bola.
jeudi, 28 juillet 2016 15:32
Kaloara Imerimandroso : Potehin’ireo mpitrandraka volamena ny tanimbary
Mitaraina noho ny fahapotehan’ny tany fambolena, amin’ny afitsok’ireo mpitrandraka volamena any an-toerana ny mponina ao Ambodisakoana sy Kaloara, Kaomininia Imerimandroso, Distrikan’Ambatondrazaka. Miantso fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mponina any Kaloara satria dia efa miha-manantona ny ala arovana ao amin’ny Kaominina Amparihitsokatra ireo mpitrandraka, ka manahy ny mponina sao ho potika hatramin’ny Parc.
Anjiajia: Tandremo sary mety ahatohina
jeudi, 28 juillet 2016 14:29
Anjiajia-Ambatoboeny : Feno habibiana ny namonoana ireo zandary roa
Lavo amperinasa, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana i Jaomaro, 48 taona sy Randrianirina Zo, 30 taona, zandary nanao fanarahan-dia omby very rehefa nifanandrina tamin’ny dahalo ny alin’ny 13 hifoha 14 jolay teo. Ahiana ho ekipan’ireo Jamà, izay karamaina hiambina tanàna na olona manana omby any ambanivohitra, no namono nahafaty ireo zandary roa ireo. Ny jamà no mampiasa antsy lava rehefa miasa. Nahitana dian’antsy lava anefa teny amin’ny vata mangatsiakan’ireo zandary roalahy ka izay no heverina porofo iray hilazana fa izy ireo no namono ireo zandary tany Anjiajia ireo. Mbola mitohy moa ny fanadihadina ataon’ny zandary hamantarana ny marina momba ity vono olona mahatsiravina ity.
jeudi, 28 juillet 2016 13:16
Betioky Atsimo : Mpanjono iray hita faty
Raim-pianakaviana iray no maty namoy ny ainy voavely kibay teo amin’ny lohany, tany amin’ny reniranon’i Onilahy, distrikan’i Betioky Atsimo. Raha ny vaovao voaray dia niala tao an-tranony vao maraina ny talata teo ity lehilahy ity rehefa nandeha nanjono. Tsy niverina intsony izy ny hariva, ka nifampitadiavan’ny fianakaviana sy ny mpiray tanàna satria noheverina ho latsaka tany anaty rano. Ny ampitson’io dia nisy nahita ny fatiny nihosin-dra. Rehefa natao ny fizahana ny razana dia vaky loha ary nisy mangana be ny faritry ny vatany, ary mbola hita tsy lavitra teo ny vantan-kazo namonoana azy. Tsy mbola fantatra hatreto ilay nahavanon-doza na dia efa misy olona ahiahian’ny fianakavian’ny maty aza. Tsy hay na vokatry ny fialonana na lonilony na asan-jiolahy tsotra izao ity trangana vono olona nahatsiravina ity.
jeudi, 28 juillet 2016 10:35
Mahajanga: Nangonina hiakatra andrenivohitra ny lakolosy
Maro ny halatra lakolosy any amin'ireny Fiangonana ambanivohitra ireny, ka dia betsaka ireo nanapa-kevitra ny hitondra ireo lakolosy arovana aty an-drenivohitry ny faritany aloha mandram-pandraisan'ireo mpitondra fepetra ho fiarovana ny fandriam-pahalemana. Mametram-panontaniana ny maro, ahoana no anafenana lakolosy milanja amanjato kilao nefa tsy misy maka fepetra, sao toy ny taolam-paty izay tsy mety aseho ny mpividy azy?
mercredi, 27 juillet 2016 19:53
Lalao CJSOI : Hanomboka amin'ny Asabotsy ho avy izao ny fanokafana
Efa vonona ny ekipa malagasy araky ny tenin'ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary ho entitra ihany koa ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana, izay marihina moa fa dia ho maimaim-poana avokoa ny fijerena izany lalao rehetra izany. Amin'ny 05 Aogositra ho avy izao moa no hifarana izao lalao izao, niresaka ihany koa ny Minisitra fa dia ny hira fanevan'ny CJSOI no mandeha mandritry ny fanolorana ny medaly ho an'ny Mayotte manokana.
mercredi, 27 juillet 2016 19:36
BEPC: Nivaly ny fanadinana
Nivaly io hariva io tokony ho tamin'ny 6 ora ny valim-panadinana BEPC raha ny teto Antananarivo, nahatratra 52,83 % ny salan'isan'ireo afaka amin'ny ankapobeny. Izany hoe somary niakatra raha noharina tamin'ny herintaona. Hafaliana ny ho an'ireo afaka ary tomany kosa ho an'ireo izay tsy nahaomby.
Rafanomezantsoa Jean Nirina - Filohan'ny HAFARI Malagasy
mercredi, 27 juillet 2016 10:54
Nampiakam-peo ny filohan'ny HAFARI Malagasy
Hososka avokoa hoy i Rafanomezantsoa Jean Nirina, filohan'ny HAFARI Malagasy, ireo ireo fitoriana natao taminy. Nanambara ny tenany fa voahitsakitsaka ny zon’izy ireo, ary tsy hiemotra ny hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana ny fikambanana.
mercredi, 27 juillet 2016 07:55
Jacques Hamel : Pretra Katolika novonoin'i Daesh teo ampanaovana lamesa
Tao amin'ny Fiangonana tany Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine Maritime France, raha teo ampanaovana lamesa fotoampivavahana ity mopera Katolika 86 taona, omaly talata maraina, no niditra ireto roalahy mirongo fiadiana ka tonga dia nanapaka ny tendan'ity pretra ka maty tsy tra-drano. Vitsivitsy moa ireo mpiangona tao ka nisy ihany koa no naratra, nefa afaka nampandre ny polisy. Vantany vao nivoaka ny Fiangonana izy roa lahy dia raikitra ny fifandonana tamin'ny polisy ka dia tifitra basy no nitsena azy ireo ka dia lavo. Nitonona nahavanona izao abibiana izao moa ireo silamo mahery fihetsika Daesh. Manameloka izao fampihorohoroana izao ny rehetra, eny hatramin'ireo mpino Silamo aza.
mardi, 26 juillet 2016 23:29
Andravoangy ambony: Biby hafahafaha
Biby hafahafa tsy hay alika, tsy hay kisoa no hita teny Andravoangy ambony.
Page 325 sur 394